विषादीरहित फलफूल, तरकारी जनताले कहिले खान पाउँछन् ? मन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो... - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > कृषि/पशुपालन > Current Article
विषादीरहित फलफूल, तरकारी जनताले कहिले खान पाउँछन् ? मन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो…
२३ माघ, खबरमञ्च, at 5:43 PM
By खबर मञ्च / February 6, 2019 / Comments Off on विषादीरहित फलफूल, तरकारी जनताले कहिले खान पाउँछन् ? मन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो…
काठमाडौँ । सांसद रामबहादुर विष्टः विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी नेपाली जनताले कहिलेसम्म खान पाउँछन् ?
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालः विगतको तुलनामा अहिले ९९ प्रतिशत विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी प्रयोगमा आएका छन्, विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा सरकारले जोड दिइराखेको छ ।
मन्त्रालयले हालै ७०० नमूना परीक्षण गर्दा सो नतिजा आएको मन्त्री खनालको जवाफ थियोे । प्रतिनिधिसभा आजको बैठकको प्रश्नोत्तरमा मन्त्री खनालले सो जवाफ दिँदै प्राङ्गरिक अभियान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको, विषादी ऐन २०४८ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “चोरबाटोबाट विषादी आउन नदिन सरकार सचेत छ ।” अब ढुक्कसित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी खाँदा हुन्छ ? सांसद विष्टकै पूरक प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले भने, “खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी ढुक्कसित खाँदा हुन्छ ।”
काभ्रे, धादिङ, ललितपुरका केही जिल्लामा तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम हुँदै गएको जानकारी दिँदै उनले कुन फलफूलमा कति विषादी छ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रयोगशाला विस्तार र थप जनशक्ति परिचालनमा सरकारको प्राथमिकता भएको बताए ।
“खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीमा विषादीमा निषेध गर्दै जाने नीति सरकारको छ”, उनले भने । मन्त्री खनालले भन्सार नाकाबाट तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा आयात गर्दा प्रयोगशाला परीक्षणका नतिजामा कढाइ तथा विषादीका ती पदार्थ आयात गर्न नदिइने बताए ।
खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीमा विषादीरहित छ भन्ने पत्याउन सकिन्न ? डा मीनेन्द्र रिजालको पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले भने, “जैविक विषादीको प्रयोग बढ्दो छ, घातक विषादीको प्रयोग न्यून छ । यसैकारण विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बढ्दो छ ।”
विषादीरहित नेपाल कहिले होला ? सांसद देवेन्द्रराज कँडेलको पूरक प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, “सरकारले ६ नं प्रदेशलाई प्राङ्गारिक उत्पादन प्रदेश घोषणा बनाउने अभियानमा रहेको छ । विस्तारै विषादीरहित नेपाल बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।”
Published:7months ago on February 6, 2019
Last Modified: February 6, 2019 @ 5:43 pm
Filed Under: कृषि/पशुपालन, राजनीति
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उपसमिति गठन
भेनेजुयलाका विषयमा आफ्नो वक्तव्यमा अडिग छुः अध्यक्ष दाहाल
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुद्वारा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी